Uya ubonakala umvuko wendulo kupolitiki yamazwe - Bayede News
Uya ubonakala umvuko wendulo kupolitiki yamazwe
Izinsolo ezishaqisayo ngoMnyango
Igadlana buthule iRussia, iMelika neChina kanti amaJalimane wona agasa phansi njengomswenya
AKEKHO osaphakamise isikhali noma wajuba amagumgedlela ukuba ayohlasela kepha lokho akusho ukuthi impi kayikaqali phakathi kwezikhondlakhondla zamazwe. Oshicilelweni lweBAYEDE lamhla zingama-24 kuNtulikazi kuya mhla lulu-1 kuNcwaba 2014, umbhali waveza lokho okunyonyobela umhlaba nakufanisa nalokho okwakwenzeka ngezikhathi zempi yomshoshaphansi wamazwe (Cold War). Uma ngabe bekukhona ukungabaza okwenzeka muva nje sekuqinisekisa ngisho umuntu obenokungabaza ukuthi seyisukile. Le mpi ehlanganisa izwe laseRusssia, iUnited State kanye neChina kayidlani emathafeni njengoba kuvamile nxa kunempi kepha igadlana kwezomnotho.
Namuhla uma kubukwa ipolitiki yezomnotho emazweni ngamazwe kukhona okuqaphelekayo, ukuntengantenga komnotho. Lokhu kushiya amazwe amancane esenkingeni yokuqoma abalingani abazoba yihawu ngoba wonke umuntu uyawuzwa uzamcolo ozolethwa wukuntenga komnotho. Amazwe ase-Afrika yiwo asenkingeni ngoba njengoba kwakunjalo ngezikhathi zeCold War, ezwenikazi i-Afrika yilapho izimbangi ziphosana khona kuqothuke utshani. Ubufakazi balokhu nje kucace kwathi bha lapho iChina neMelika bebanga ubuqhude e-Afrika. Kulo mbango iChina isebenzisa umlando kanjalo nobudlelwano balo namazwe ase-Afrika ayecindezelwe . Lona ngumlando omuhle ngoba elaseChina e-Afrika kalibukwa njengomcindezeli kepha lithathwa njegomlingani wabacindezelwa owakwazi ukukhoselisa izinhlangano zombangazwe ngezikhathi ezinzima. Ngakolunye uhlangothi iMelika njenge-United Kingdom namazwe amaningi aseNtshonalanga bathathwa njengabacindezeli. Ngokubona leli nxeba iChina isiphenduke ‘uMsamariya olungileyo’ emazweni ase-Afrika anezikweletu ezesabekayo. Elinye lala mazwe yiZimbabwe engakufihli ukuthi yona isiqome iMpumalanga. Njengesoka elinemali elaseChina nsuku zaphuma livezela amazwe ase-Afrika elingakwenza, kusuka ‘ekunikeleni’ ngokwakha isakhiwo esikhulukazi esingamahhovisi enhlanganoi ye-African Union e-Ethopia kuya ekungeniseni emazweni afana noKenya naseNingizimu Afrika. Lapha ke eNingizimu Afrika abuye anyelwa nayinyoni ekhanda, lapho eba senhlahleni yokuba ahlonzwe njengabantu abamnyama ababecindezelwe. Okuphinde kwawelisa elaseChina wukusungulwa kwebhange lamazwe angaphansi kophahla lweBRICS okuhlanganisa amazwe iBrazil, iRussia, i-India iChuina kanye neNingizimu Afrika. Ngokungabazeki leli bhange lizoncintisana nalelo lomhlaba elizinze eMelika nelilawulwa khona.
Ongoti abaningi bayavumelana ukuthi ngokuqomisa kwelaseChina e-Afrika lazicabela indlela eya kwampumelelo ngoba yafika amazwe ase-Afrika evele exakekile futhi sekuwame emphinjeni okwenziwa ngawaseNtshonalanga nezakhiwo zawo ezifana neWorld Bank kanye ne-International Momentary Fund.
Nayo iMelika kayilali ingandlalelwe
IMelika nayo kayeneme futhi ayizibekile phansi ngoba ikuqonda kahle ukuthi nxa ingavumela iChina ikhonye kuyosho ukusuka esikhundleni ebisiqhoqhobele iminyaka. Kuyimanje iMelika ngaphansi kobuholi bukaMengameli uBarack Obama bubhula imililo kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Uhambo nje lwakamuva lwase-Afrika kanjalo nezinkulumo azethulayo eKenya kanye nase-Ethopia ziveza isithombe somholi ohlwaya into athi ngeyakhe kepha ilahlekile. Uma ubuka ukuhleleka kwepolitiki yomhlaba kuyacaca ukuthi iMelika ebiyisikhondlakhodla kukhona okuyilahlekele nokuyenza iphelelwe yisithunzi nokuzethemba. UMnu u-Obama qobo ezinkulumweni zakhe asuke ezibhekise ezakhamuzini zezwe lakhe kalisali elokuthi, “okumelwe kwenziwa wukuqinisekisa ukuhlonishwa kweMelika emhlabeni”. Ukuqinisekisa ukuthi nembala siyabuya isithunzi ‘nokuhlonipheka ‘ kweMelika, uMnu u-Obama wenze izinto ebezingalindelekile. Okokuqala uvuselele amaxhama okusebenzisana nesitha seMelika esidala iCuba. Akagcinanga lapho ngoba uye kwesinye futhi isitha sezwe lakhe i-Iran wafike wenza isivumelwane esimshiye egaxele kubalingani bakhe abadala okungu-Israel. Abanye bakuhumusha lokhu ngokuthi uyaxhomondela ngoba amanzi vele asengene endlini kanti abanye bathi lokhu akwenzayo kuphusile ngoba kuyoba nomvuzo omuhle kwelaseMelika eminyakeni ezayo.
Nokho akubona bonke ababona kanjalo ngoba loyo ongenele esobuMengameli kuleliya lizwe, injinga uMnu uDonald Trump uthi iChina iyisitha sezwe lakhe. Ekhuluma nabalandeli bakhe uTrump uthe: “Cabanga nje, sebentshontshe (iChina) imali nemisebenzi yethu kanye nezimboni zethu, sebethathe konke. Lokhu abakwenzayo wubusela obungakaze kubonwe bathathe okwethu bayokwakha ngakho izwe labo. Kuyimanje sibakweleta isamba esibalelwa ku-$1.4 trillion,” kubhodla uTrump. Akukho ukungabaza ukuthi uTrump uyayazi imizwa yabaseMelika mayelana neChina kwazise leli lizwe lathenga amabhodi abalelwa abalelwa ku$ 1.65 trillion (manje iChina isiwehlise aba ngu-$1.27 trillion). Yize bekuphebeza njegehaba abanye lokhu okushiwo nguTrump, ukuputshuka kwezindaba zokuthi elaseMelika lingase lijezize elaseChina ngonswinyo emuva kokuthola ukuthi abathile kuleliya lizwe bagadla kwelaseMelika ngobuchwepheshe besimanje (hacking). Embikweni wephephandaba iWashington Post nayilapho licaphune isisebenzi thizeni kuhulumeni libike ukuthi elaseMelika limunyunga ukuthi lingagadla kanjani kwelaseChina, okubalwa amathize kanye namabhizinisi ngalesi senzo. Kuthiwa abathile eChina bahlasela ngobuchwepheshe ukuze bathole imiqulu ethize yobunhloli nokuyinto okusatshelwa ukuthi inhloso wukwazi kabanzi ngezinhloli kanjalo nezinhlelo zeMelika ukuze bakhele kuzo.
Okubukeka kugijimisa iMelika wukuthi yize isaxakwe wutwayi lweChina izinto ziyaguquka kwezinye izingxenye zamazwe aseNtshonalanga. Ukukhula kwamandla ezwe laseGermany ngaphansi kukaShansela u-Angela Merkel. Amandla eGermany asedlula ngisho elaseBritain njengoba e European Union kukhala isicathulo sikaShansela uMerkel nokuyinto ecace bha ngesikhathi kudikadikwana ngenkinga ebhekene neGreece. Ukukhula kwamandla eGermany kubukeka kuyinto okumele iyikhathaze iMelika ngoba nokweChina nakho kwaqala kanje njengoba namuhla isibadlisela ogageni. Isitshengise iGermany ukuthi iyakwazi ukudlala umdlalo ngoba isifake ekhukhwini elaseFrance elibukeka lintengantenga ngenxa yesimo somnotho, futhi kayixabani neBritain kanti futhi ingumabizwa asabele ezinkingeni ezikhungethe amazwe amancane akhele isifunda se-EU.
Yize kungekho izwe eliphakamisela elinye izikhali kepha okwenzeka emhlabeni jikelele nasemazweni athize eNtshonalanga naseMpumalanga kuyakhomba ukuthi siphila esikhathini somvuka wendulo lapho amazwe emaqembu qembu, lapho abalingani bema ngandawo beqaphe ‘izitha’ kwezepolitiki nakwezomnotho. Amazwe ase-Afrika kubukeka eqhubeka nokuba yizindibi kule mpi yomshoshaphansi.
Bayede News Sep 7, 2015